Ny Huawei Mate 9 Pro misy écran curved dia efa ofisialy | Vaovao momba ny gadget
Omaly dia nasehonay anao ny sary voasivana maromaro toa ilay Huawei Mate 9 Pro, kinova vaovao an'ny sahanin'ny mpanamboatra sinoa izay hanatevin-daharana ny Mate 9 sy Marte 9 Porsche Design izay efa nihaonantsika andro lasa izay tamin'ny hetsika fampisehoana nokarakarain'i Huawei. Ny tsy noeritreretinay velively dia ora vitsy monja taty aoriana dia ho fantatsika ny fahatongavana ofisialy eo amin'ny tsenan'ity kinova Huawei Mate 9 vaovao ity.
Araka ny hitantsika omaly, ary anio indray, amin'ny sarin'ilay finday avo lenta vaovao, ny antsipiriany ihany no miova dia ny endrika, miaraka amin'ny fampidirana efijery miolaka. Ny manam-pahaizana sasany dia efa nanome isa ity Huawei Mate 9 Pro ity a Fampivoarana mora kokoa amin'ny Huawei Mate 9 Porsche Design. Ny manam-pahaizana tsy dia manam-pahaizana toa ahy dia mahita amin'ny terminal misy terminal mitovy amin'ny sisin'ny Galaxy S7.
Voalohany indrindra, hodinihinay ny lehibe indrindra endri-javatra sy famaritana ny Huawei Mate 9 Pro vaovao;
Refy: 152 x 75 x 7.5 mm
Milanja: 169 grama
Asehoy: 5,5 santimetatra miaraka amina vahaolana 2560 × 1440 px ary miolakolaka
Mpandrindra: Kirin 960 miaraka amina core 8 amin'ny 2.3 sy 1.8 GHz
RAM: 4 GB na 6 GB LPDDR4
Fahatsiarovana: 64 GB na 128 GB azo itarina amin'ny tranga roa amin'ny karatra microSD
Fakan-tsary aoriana: sensor roa miaraka amin'ny fanamafisana optika ary nosoniavin'i Leica, loko 12 megapixels ary 20 megapixels b / w
Fakan-tsary aloha: 8 megapixels
Batterie: 4.000mAh misy fiampangana haingana
Rafitra miasa: Android 7.0 Nougat miaraka amina layer EMUI 5.0
Fifandraisana: karazana USB C 3.0, mpamaky tanan-tànana ary NFC
Ity kinova fahatelo amin'ny Huawei Mate 9 ity dia tsy tokony hialona an'ireo roa hafa, ary koa amin'ny fitaovana hafa amin'ilay antsoina hoe tsena avo lenta. Ny fahombiazana dia azo antoka ihany koa noho ny fizotran'ny Kirin 960 izay nofaritan'i Huawei ho mpikirakira tsara indrindra sy matanjaka indrindra eny an-tsena, mandresy ny ankamaroan'ny mpifaninana aminy, afa-tsy ny Apple A10.
Ny fisian'ity Huawei Mate 9 Pro ity dia mbola miandry ny fanamafisana avy amin'ny mpanamboatra sinoaoy dia ny tsaho sasany milaza fa any Chine ihany no misy azy, na dia hafahafa aza izany raha tsy tonga tany Eropa noho ny fahalianany be mpampiasa be.
Mikasika ny vidiny, dia ho akaiky kokoa ilay misy Huawei Mate 9 noho ilay manana ny Porsche Design.
Atorinay anao izao ny vidin'ny kinova roa amin'ny Huawei Mate 9 Pro izay ho hita eny an-tsena;
Huawei Mate 9 Pro miaraka amin'ny RAM 4GB + ROM 64GB: 4699 yuan (€ 632)
Huawei Mate 9 Pro miaraka amin'ny RAM 6GB + ROM 128GB: 5299 yuan (€ 713)
Ahoana ny hevitrao momba ity Huawei Mate 9 Pro vaovao ity?. Lazao anay ny hevitrao amin'ny toerana natokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ny Huawei Mate 9 Pro misy écran curved dia efa ofisialy
Fitaovana Google efatra izay tsy fantatrao